Isilawuli-moya seMini neMidi City Bus noma seTourist Bus ifektri nabakhiqizi | SONGZ
Uchungechunge lwe-SZG, lwebhasi ledolobha elingu-6-8.4m kanye nebhasi lezivakashi elingu-5-8.9m, i-AC yebhasi elincane nebhasi le-midi
I-SZGK-ID (Ububanzi ngo-1826mm)
I-SZGZ-ID (Ububanzi ngo-1640mm)
I-SZGK-IF-D / SZGK-II-D / SZGK-II / FD / SZGK-III-D (Ububanzi ngo-1826mm)
I-SZGZ-IF-D / SZGZ-II-D / SZGZ-II / FD (Ububanzi ngo-1640mm)
SZG uchungechunge uhlobo ophahleni ukukhwezwa air conditioner. Kusebenza kubhasi lomuzi eliyi-6-8.4m kanye nebhasi lezivakashi elingu-5-8.9m. Ukuze ube nobubanzi obubanzi kakhulu bokusetshenziswa kwamamodeli ebhasi, kunezinhlobo ezimbili zobubanzi beSZG chungechunge, ngo-1826mm no-1640 ngokulandelana. Ngemininingwane engaphezulu sicela ubheke ngezansi noma ungaxhumana nathi ku-sales@shsongz.cn ukuthola eminye imininingwane.
Ukucaciswa kobuchwepheshe bebhasi A / C SZG Series:
Imodeli (Uhlobo Olumfushane):
8 kW noma 27296 Btu / h
12 kW noma 40944 Btu / h
16 kW noma 54592 Btu / h
10 kW noma 34120 Btu / h
14 kW noma 47768 Btu / h
18 kW noma 61416 Btu / h
I-AK33 (TM31 iyakhethwa)
I-1800 m3 / h (2)
I-45 A (24V)
I-55 A (24V)
I-65 A (24V)
Imodeli (Uhlobo Olubanzi)
I-SZGK-II / FD
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZG-IX-D Imininingwane Yezobuchwepheshe be-SZGK-ID Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZGK-IF-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZGK-II-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZGK-IIF-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZGK-III-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZG-XD Imininingwane Yezobuchwepheshe be-SZGZ-ID Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZGZ-IF-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZGZ-II-D
4. ICompressor VALEO noma i-AOKE ingakhethwa.
Isendlalelo se-R & D SZG Series:
Ngokuthuthuka kwamazinga abantu okuphila, izinga lokududuza elidingekayo liyakhuphuka futhi liqhubeke, okuholele ekufuneni okunamandla nangaphezulu kwama-air conditioners ku-OEM, kufaka phakathi ukubonakala kwesifutho somoya, amandla okupholisa, umsindo, njll. uchungechunge lwe-SZG lwenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokusemandleni, ngokususelwa ekuvikeleni imvelo, amandla nezinto zokonga, ukwenza ngcono ukusebenza kahle, ukunciphisa isisindo, umsindo ophansi nokudlidliza, ukuphepha nokwethembeka, kanye nokulungiswa okunobungane. Imikhiqizo emisha ye-SONGZ ithuthukiswa njalo ukuhlangabezana nezidingo zemakethe.
Ukwethulwa Okuningiliziwe Kwezobuchwepheshe kwe-SZG Series Bus Air Conditioner
1. Ubuchwepheshe be-condenser esebenza kahle kakhulu
I-condenser ifakiwe phezulu, inendawo enkulu ebheke umoya, futhi ama-air inlets aklanyelwe ezinhlangothini zombili zekhava ephezulu ye-condenser, okuqhubeka nokunciphisa ukumelana nomoya kwe-condenser futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokushintshana kokushisa.
Idizayini ye-condenser ngaphandle kwesakhiwo segobolondo eliphansi lomoya. Ubude bomkhiqizo abudluli kumamitha ayi-2,5. Isakhiwo sesakhiwo sihlangene. Idizayini engenhla yenza ukukhanya komkhiqizo ngesisindo, nevolumu incane.
3. Uhlelo lokusebenza lwezinto zobuchwepheshe obuphezulu
Imikhiqizo ye-SZGZ (umzimba omncane), impahla engezansi yegobolondo yenziwe nge-LFT + aluminium alloy material. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto ezihlanganisiwe, inokuqina okucacile okuphezulu namandla athile, ukumelana okuhle komthelela; ukuthuthuka kokumelana okuthuthukile, nokuqina okuhle kobukhulu. Ukumelana nokukhathala kuhle kakhulu, futhi isisindo esiphelele somkhiqizo sincishiswe cishe nge-15%.
I-LFT Bottom Shell ye-SZG (Umzimba Omncane)
4. Kulula Ukulungiswa
Ikhava ephezulu ye-SZG wide-body series air conditioner condenser isebenzisa isakhiwo sokuxhuma ihinji. Akunasidingo sokususa ipuleti lonke lekhava lapho ulayisha imoto, esindisa kakhulu isikhathi sokufaka. I-fan evuthayo ifakiwe kusuka phezulu, ngakho-ke asikho isidingo sokuvula ikhava lapho ukhipha ifeni yokuncibilikisa. Lapho imoto ehwamukayo isalungiswa, kudingekile ukuvula izembozo eziseceleni, okulula ukuzisebenzisa ngemuva kwensizakalo yokuthengisa.
5. Idizayini Yezokuphepha
Ugongolo lohlangothi lwophahla olufakwe i-evaporator lususa ukubopha kwesibili, futhi isibambo somoya somhlangano we-evaporator sisebenzisa isakhiwo esisha sokugoba esihlanganisiwe, esingakwazi ukunciphisa kuphela isisindo somkhiqizo, kodwa futhi nokuvikela ngempumelelo ingozi efihliwe ukuvuza kwamanzi ngezinsuku zemvula.
6. Ububanzi besicelo
Uhla oluphelele lwe-SZG lulungele amabhasi kusuka kumamitha ayi-6 kuye kwangu-8.4 kanye nebhasi lezivakashi elisuka kumamitha ama-5 kuye kwangu-8.9. Ngasikhathi sinye, ububanzi obuphelele be-SZGZ (umzimba omncane) wokupholisa umoya kanye nesikhala endaweni yokuphuma yomoya kungu-180mm, okuyi-120mm incane kunomzimba obanzi, ongasetshenziswa ebhasini elincane noma elincanyana.
I-SZG Series Bus AC Functions Thuthukisa, Ongakukhetha）
1. Ubuchwepheshe bamapayipi nokushisa
3. Kusebenza ku-Ultra-low Temperature
Ingakhuphula i-fan evuthayo futhi isebenzise uhlelo ngendlela efanele, efanelekile i-10-12m bus air conditioner ehlobo ezindaweni ezibandayo njengeNyakatho Yurophu.
Langaphambilini Uhlelo Lokulawulwa Kwebhethri Lokushisa Kwebhasi Likagesi, kanye Nomqeqeshi
Olandelayo: I-Air Conditioner yeBhasi, Umqeqeshi, Ibhasi lesikole neBhasi eliqokiwe